Ukuphupha ngeHeroin Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iyeza 'heroin' linamandla aphezulu okuxhomekeka, nokuba lithathwa njani na. Ke xa uphawu lwephupha "iqhawekazi" livela kuthi, umbuzo uphakama ngokukhawuleza wokuba ingaba umntu kufuneka aqonde ukuxhomekeka okuthile el mundo yomlindo. Okanye ngaba ukubaleka kwinyani, okunokufezekiswa ngokusetyenziswa kweziyobisi, kudlala indima ebaluleke ngakumbi ekutolikeni kwephupha?
1 Uphawu lwephupha «Heroine» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Heroine» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Heroine» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Heroine» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko lwamaphupha ngokubanzi, umfanekiso ophupha "iqhawekazi" ubukhulu becala ufuzisela a ukunxila okungenamda. Kule nto, umphuphi okomzuzwana kwihlabathi lokuvuka kwaye izenzo zakhe zichaphazeleka ngamandla yiyo.
Nangona kunjalo, le euphoria yokwenyani ayifanelanga ukuba ibangelwe kukusetyenziswa kwesiyobisi, kodwa inokulandelwa nakwezinye iziganeko kubomi bephupha. Ngephupha lakhe le-heroin, umntu oleleyo kufuneka azi ukuba le meko yokunxila inokuphela ngaxa lithile kwaye kufuneka aphile neziphumo zezenzo zakhe.
Nabani na obona i-heroin okanye i-heroin ikhoboka emaphupheni abo kufuneka abonise ukungakwazi kwabo ukujonga ngokunzulu izinto ezimbi ezibonakala ngathi "zilungile imeko." Umphuphi kufuneka azame ukufumana umgama omncinci kwisihloko esithile. Kungenxa yokuba kuphela emva koko apho kuya kwenzeka ukuba ukwazi ukujonga kwakhona ngokuchanekileyo. Inaliti okanye ukungenisa i-heroin ephupheni ihlala ibonisa Iziyobisiubuthongo obunqamle kwihlabathi lokuvuka, njengokuthenga okanye umlutha wefowuni.
Ukuba umntu oleleyo uthenga okanye athengise i-heroin ephupheni lakhe, ufumana, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, uphawu lokulahleka okukhulu komfanekiso kubomi bokuvuka, oya kuthi abubangele ngezenzo zakhe zokungxama.
Uphawu lwephupha «Heroine» - ukutolikwa kwengqondo
Isimboli yephupha "i-heroine" ingabonisa kwinqanaba leengqondo ukuba uncedo lwangaphandle luyafuneka Utshintsho lokuqonda fumana. Awuyi kuphumelela kule projekthi uwedwa. Ke ngoko, kufuneka uncedo olufanelekileyo.
Ukufunyanwa ngokungekho mthethweni kwe-heroin ephupheni kufanekisela ukunyuka kwamaxabiso. Ukulungela ukuthatha umngcipheko lomntu uphuphayo kwihlabathi lokuvuka. Ukuba umntu oleleyo uthatha i-heroin ngokwakhe ephupheni, uboniswa ilahleko enokwenzeka yolawulo ebomini bokuvuka. Uziva engakwazi ukusebenza yedwa okanye kuxanduva lwakhe kwaye, ke, kuxhomekeke kwabanye.
Kwezinye iimeko, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, umfanekiso wephupha "i-heroine" ingabhekisela kwi Kukhanye zibonisa inyani kwihlabathi elivukayo. Umphuphi akafuni ukujongana neemeko zobomi bakhe bokwenyani, kodwa abaleke enyanisweni ngokutya iziyobisi.
Uphawu lwephupha «Heroine» - ukutolika kokomoya
Ngokwembono yokomoya, uphawu lwephupha "iqhawekazi" lisetyenziswa njengesalathiso sendlela ethandabuzekayo ye Ukukhuthaza ulwazi ijongiwe. Umphuphi angathanda ukufumana ulwazi olukhulu lokomoya kwihlabathi lokuvuka, kodwa ukhetha indlela engeyiyo eyendalo.